Juventus oo weerar ku ah Manchester United suuqa soo aaddan… (Waa kee bartilmaameedkeeda cusub?) – Gool FM
Juventus oo weerar ku ah Manchester United suuqa soo aaddan… (Waa kee bartilmaameedkeeda cusub?)
(Turin) 13 Sebt 2021. Kooxda kubadda cagta Juventus ayaa dooneysa inay xagaaga soo aaddan sameyso tukaameysi aad u wanaagsan, waxaana haatan bartilmaameedyadeeda ka mid noqday mid ka mid ah xiddigaha Manchester United.
Kooxda Taliyaaniga ka dhisan ayaa lagu soo warramayaa inay diiradda saareyso lasoo saxiixashada Goolhaye David de Gea oo ka mid ah xiddigaha muhiimsan kooxda Man United xilli ciyaareedkan.
30-sano jirka reer Spain ayaa kula jira Red Devils qandaraas dhacaya 2023 hase ahaatee, ilaa iyo haatan ma cadda mustaqbalkiisa kaddib xilli ciyaareedkan xilli suuqii xagaagan ee xirmay dhammaadka bishii hore lala xiriiriyay inuu ka hayaamo gegada Old Trafford.
Sida laga soo xiganayo Todofichajes, Bianconeri ayaa baadi goob ugu jirta baddelka xiddiga shabaqa u ilaaliya ee Wojciech Szczesny kaasoo qudhiisa mustaqbalkiisa aanan la hubin, waxaana wararku ay sheegayaan inay Juve u dhaqaaqeyso xagaagan De Gea.
Si kastaba ha ahaatee, xiddigii hore ee Atletico Madrid ayaa Manchester United u saftay 445 kulan tan iyo ku biiristiisii 2011 waxaana uu kula guuleystay Premier League, FA Cup iyo EFL Cup oo dhammaantood min hal jeer ah.
Pep Guardiola oo sheegay kooxda cabsida ugu badan uu ka qabo tartanka Champions League wareeggiisa guruubyada isagoo dafiray PSG